China Tungsten Carbide Mkpanaka rụpụta na Factory | N & D Na-eme Ihe
Tungsten Carbide Mkpara
* Ndidi H6
A na-ejikarị osisi simenti carbide siri ike eme ihe maka ngwá ọrụ carbide siri ike dị elu dị ka ndị na-egwe ọka, ndị na-emecha ihe, ihe eji eme ihe ma ọ bụ ndị na-emegharị ihe. Enwekwara ike iji ya maka igbutu ihe, ịzọ stampụ na ihe atụ. A na-eji ya na akwụkwọ, nkwakọ ngwaahịa, mbipụta, na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe anaghị arụ ọrụ.
A na-eji Tungsten Carbide Rods (nke a na-akpọkwa Cemented Carbide Rods), a na-eji ha eme ngwaọrụ ndị na-egbu ihe carbide dị elu maka ịkpụzi alloys ndị na-eguzogide okpomọkụ, dị ka ngwụcha ngwụcha, drill, reamer. Na odide nke elu ekweghị ekwe, elu ike, chemical mụ, ala mgbasa ọnụọgụ, electric na okpomọkụ na-eduzi, na sintered tungsten carbide mkpanaka na-ebe etinyere na ulo oru rụpụta ebe.
A na-ejikarị osisi simenti carbide siri ike eme ihe maka ngwá ọrụ carbide siri ike dị elu dị ka ndị na-egwe ọka, ndị na-emecha ihe, ihe eji eme ihe ma ọ bụ ndị na-emegharị ihe. Enwekwara ike iji ya maka igbutu ihe, ịzọ stampụ na ihe atụ. A na-eji ya na akwụkwọ, nkwakọ ngwaahịa, mbipụta, na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe anaghị arụ ọrụ. Enwere ike iji ogwe osisi Carbide ọ bụghị naanị maka ịcha na ịkụcha ihe kamakwa maka agịga ntinye, ọtụtụ mpịakọta na-eyiri akụkụ na ihe nhazi. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya n'ọtụtụ mpaghara, dị ka igwe, kemịkalụ, mmanụ ala, ọla, elektrọnik na ụlọ ọrụ nchekwa.
Pụrụ iche na tungsten carbide gburugburu Ogwe, na a pụtara ìhè ngwaahịa akara nke coolant na ihe siri ike carbide mkpanaka, anyị na-Nlụpụta na ngwaahịa unground na ala carbide mkpara n'ihi na ị. Ngwunye anyị na-egbu mara mma nke h6 anyị kachasị ewu ewu.
Nke gara aga: Ahaziri Tungsten Carbide Rotary Burrs
Osote: Tungsten Carbide efere